Abu Dujaana oo sheegay in Kooxda Al-Shabaab ay bur-bur qarka u saran tahay | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Abu Dujaana oo sheegay in Kooxda Al-Shabaab ay bur-bur qarka u saran tahay
Sarkaal ka tirsan garabka Mukhtaar Roobow ee Al-Shabaab oo magaciisa kusoo koobay Abu Dujaana, ayaa sheegay in Kooxda Al-Shabaab ay bur-bur qarka u saran tahay.
Abu Dujana oo la hadlay website taageera Roobow, ayaa sheegay in Khilaafka ugu weyn uu yahay mid ka taagan Hanaanka lagu maamuli lahaa Deegaanada ay gacanta ku heyso Kooxda iyo qaabka loo xakameyn lahaa Sirta oo inteeda badan banaanka u baxda.
Abu Dujaana wuxuu sheegay in Khilaafka Kooxda uu sababay in dambi la’aan loo xiro Saraakiil badan iyo dad shacab ah, kadibna dusha loo saaro dambiyada la xiriira fududeynta weerarada cirka ah ee lala beegsado Xarumaha Kooxda, si loo indha sarcaadiyo Ra’yul caamka.
Isaga oo ka hadlaayay dhibaatada ay kooxdu ku heyso Saraakiisha iyo shacabka ayaa waxa uu yiri “Marka ay dhacaan duqeymaha waxaa xabsiyada shabaab afka loo saara dad badan oo qaar kood kamid ah Kooxda iyo kuwa kale oo shacab masaakiin ah oo aan waxba galabsan marka ay xabsiga dhex dhigaan markaasi ayaa xabsiga lagu cadaabayaa waxaana lagu qasbayaa inay sheegtaan inay yihiin wardoon u shaqeeya Dowlada, ama fududeeyay weerar markaasi dhacay”.
“Waxaa dhacda in xiliyada qaar ay ku fashilmaan waxyaabo badan sida weeraro la qaado, dhalinyaro qaab qaldan loo adeegsado iyo dad ka biya diida qaadashada fakirka kooxda, waxa ay sameynayaan marka ay xabsiga dhigaan wey cadaabayaan kadibna afka ayay sharooto uga dhajinayaan si aysan u qeylin waxa ayna ku dhextooganayaan xabsiga”.
Waxa uu intaa ku daray hadalkiisa “Waa arrin igu dhacday inta aan ku jiray xabsiga, waxaa ii muuqatay in Alshabaab garabkii uu ka dhintay Godane iyo diinta aysan meel wada-galin waayo shaqsigii ka tirsan wey dilayaan kan aan ka tirsaneyna wey dilayaan, nolosha ayay cadow ku yihiin”.
Abu Dujaana waxa uu ka digay in Alshabaab garabkii Godane ay mataaneeyan diinta iyo dhaqankooda, wuxuuna ku tilmaamay kuwo u baahan inay dib u baaraan diinta iyo waxa ay ka qabto dhaqankooda.